I-DDoS ihlaselela kunye nokuKhuselwa kwiBotnets kunye neZingcebiso ze-Semalt
Ngokwemiyalelo yabaphathi be-botmasters, i-botnets ixaka inani elikhulu leekhomputer ukwenza imisebenzi engekho mthethweni. Amandla anjalo awenza abahlaseli be-intanethi benze ulwaphulo-mthetho oluhlukileyo kwi-intanethi Ngokuqhelekileyo, olu lwaphulo-mthetho alufumanekanga kwaye lunonakalisa idumela lakho lombutho ngelo xesha. Ngokomzekelo, ngo-2016, i-botnet ethile yayisetyenziselwa ukudala ukuhlaselwa kwe-DDoS, echaphazela amaninzi amajelo eendaba ezentlalo njenge-Twitter. Ukuba ufumana ii-imeyile ezininzi imihla ngemihla, amathuba kukuba idilesi yakho ye-imeyile iyaziwa ngabagaxekile. Igor Gamanenko, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ngenhlanhla, sinalobuchule obuninzi bobuchwephesha bokuhlunga ugaxekile, uninzi luncedo ekuthintela ukufika kwemilayezo engekho mthethweni neyikrokre.
Asinakukunyanzela into yokuba akunakwenzeka ukukrazula iibhenets kunye ne-imeyli yogaxekile. I-FBI iphando ngekomiti ye-Senate yase-United States ngenjongo yokuchonga iikhomputha ezithelelekileyo. Ngenxa yoko, uphando lubonise ukuba abahlaseli banokulawula iikhomputha zekomiti nganye xa befuna. Nangona ubukhulu balo mbandela, abasebenzisi bekhomputha abaqhelekileyo abavumi ukungazi nto malunga neebhodnetshi..I-Botnets ngumkhosi weekhomputha kunye nezixhobo eziphathekayo ezisuleleke yi-malware kwaye ziye zatshatyalaliswa ukwenza ulwaphulo-mthetho lwe-intanethi, ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. I-Hackers, ekuhambeni kwabo, ingabalela i-botnets ikude kwaye ibacele ukuba babambe ulwazi olunzulu, basasaze i-malware, bathumele ama-imeyli ogaxekile, baze baqalise ukuhlaselwa kweDDoS.
Ukuthumela ugaxekile nokusabalalisa ii-virus kunye ne-malware
Okokuqala, kufuneka ukwazi yonke into ngogaxekile. Yenzelwe ukukuthumelela i-imeyile eyisichukuphuku neyicasulayo. Ezinye iikhomputha zeekhompyutheni zinikezelwe ukuthumela imilayezo yogaxekile kwinani elikhulu leedilesi ze-imeyile. Injongo yale imeyile yegaxekile isasaza ii-virus kwaye ihambisa i-malware kwi-intanethi. Unokuba yixhoba lala ma-imeyile njengoko iimveliso ezinikelayo zibonakala ziphezulu zomgangatho kwaye ezinjalo zixabiso elifanelekileyo, kodwa loo phulo lizuzisa kuphela kubagculi, kwaye awukwazi ukufumana izibonelelo ezivela kubo. Ngokomzekelo, ukuba ufumana i-imeyile evela kumsebenzisi waseNigeria athi unqobile i-$ 140 yezigidi, unokufuna ukuthatha inxaxheba okanye uthintane naye. Leyo imilayezo ekhohlakeleyo eyenza ukukhohlisa abasebenzisi kwaye ithambekele ekutshoneni amagama akho abasebenzisi kunye namaphasiwedi.
Gcina engqondweni, akufanele uphendule kwimilayezo yogaxekile. Ngaphezulu, akufanele ucofe kwiikhonkco ze-imeyile ongaqinisekanga ngazo. Ingxaki ye-imeyli yogaxekile ibe yi-topical kunye nexesha, kwaye iibhentshi ezininzi kwaye ziyaqhubeka zisebenza ngenxa yalo. Inani elikhulu lebhobho lithunyelwa kwimisebenzi yezorhwebo kunye nemibutho emikhulu yokuzuza ngemali. I-Botnets sele ijolise kwiinkampani ezifana ne-Evernote kunye ne-Feedly, kwaye abacebi bazama ukunyusa imali ngeengongelo zokuhlaselwa kwenkonzo.
Ngaba sifuna ukukhuselwa kwe-botnet?
Ikhompyutheni ekhuselwe yi-bots iphantsi kolawulo lwe-hacker kwaye ayikwazi ukulawulwa ngumnikazi wangempela. Kuya kubandakanyeka ngokunyanisekileyo kwi-cyber-crime kwaye inokuyenza ininzi yemisebenzi engekho mthethweni. Ngamanye amagama, ukuba ikhompyutha yakho isulelekile, ayiyi kusebenza ngokufanelekileyo, yenza i-intanethi ibe yindawo engaphephile nelingathandekiyo kuwo wonke umntu Source .